Bulshooyinka Warbaahinta Bulshadda | Martech Zone
Sabtida, Oktoobar 9, 2010 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Dhamaanteen waan wada lahaan jirnay - sharwadayaasha oo qeylinaya oo xanaaqaya dhammaan faallooyinkaaga - oo ka careysiinaya martidaada kale iyo guud ahaan soo saarista jahwareer. Waa wax aad u walaac badan, laakiin waxaa jira hab looga hortago sharka xun ee warbaahinta bulshada. Kani waa faahfaahin weyn oo Injineer Raadin Joornaal ah oo la soo saaray iyadoo lagu saleynayo 8 Villains ee Warbaahinta Bulshada.
Dabcan, wax yar ayaa jira xaqiiqda ah in SEJ ay ku heshay kafaala-qaade Infographic… nasiib u leh iyaga xiriirka ay soo saaraan maahan kafaala-qaadaha, haddii kale waxay ku xad-gudbayaan mid ka mid ah astaamaha xun ee iyaga u gaarka ah!
Maxay Tahay Istaraatiijiyadda Isku-xirnaantaadu Ay kuu Khasaarayso